Ungawenza njani amagqabi ephepha ngezandla? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungawenza njani amagqabi ephepha ngezandla?
Sebenzisa iphethini yamagqabi. Biyela igqabi lokwenyani kunye nepensile kwaye ulisike. Amagqabi ephepha amayeza enziwe ngolu hlobo.
Ukusuka iphepha eliluhlaza eliqhelekileyo elinombala, sikwanokusika ngokwethemplethi elungiselelwe kwangaphambili.
Nanga amaphetshana anje anokwenziwa ngokukhawuleza ngaphandle kokusebenzisa itemplate.
Amagqabi enziwe ngephepha elicekethekileyo elinamagqabi anokugqobhoza isitena, amagqabi enziwe ngephepha elinobukhulu asetyenziselwa ivolumu. Unokwenza iincwadana ezinamaphepha kwizicelo zamaphepha. Kwisampulu, thabatha amagqabi ezityalo zokwenyani, emva koko imivimbo emincinci iya kunika ubume begqabi lokwenyani.
Amagqabi ephepha anokwenziwa kusetyenziswa ubuchule be -amiami, amagqabi angumthamo kunye namagqabi apeyintwe ngepeyinti. Amagqabi eSkeleton abukeka emhle.
Jonga kwi-Intanethi ukhetho olukufaneleyo, uprinte okanye wenze isangqa kwiofisi esweni, usike kuyo kwaye uyisebenzise njengephethini kwamanye amaphepha. Ukusuka kwinto oza kuyisika: ungasebenzisa iphepha elinombala okanye upende iphepha elimhlophe ngombala olufunayo.
Apha umzekelo, amashiti
Kunokubakho ukhetho oluninzi. Unokuzoba iincwadana ezinemifanekiso emihle, uzipende imibala, emva koko uzisike. Ukuba awuyazi indlela yokuzoba konke, ngoko ke ikho enye indlela onokuyifumana: unokufumana imifanekiso okanye iipensile zamaphetshana kwi-Intanethi, ziprinte, zifake imibala kwaye usike. Kwaye ungafumana ubuhle bokwenene kunye namagqabi emithini, wenze isangqa kwaye usike ngendlela efanayo. Ngendlela, isifundo esihle sokuchitha ixesha kunye nomntwana.
Kukho umbono onomdla wendlela yokwenza amagqabi ephepha usebenzisa ubuchule be -amiami. Amagqabi anjalo, ade afane nawokwenyani, anokusetyenziswa ukuhombisa igumbi okanye iimpahla, okanye ungenza isithsaba samagqabi anjalo. Ukwenza oku, singenza amagqabi emapile ngokugoba, kuba oku, kufuneka senze amaphepha ephepha apho siqokelela khona amagqabi emithi.
Uyenza njani loo trilistic ingabonakala kwiinkcukacha apha .. Kodwa kuya kufuneka sisike isikwere kwiphepha lemibala.
Kodwa sele usuka kula macandelo, unokugungqa igqabi elinye lemaphu, njengakwifoto.
Kukho umbono onjalo, uze upeyinte amagqabi ngeepensile okanye iepeyinti ezibonakalayo, ngokubona kwakho.
Kodwa ukuzoba, ukusika kunye nombala ngeepeyinti kukwayimibono emininzi enomdla nenomdla enokwenziwa ngokulula ngezandla.
Kwibhola yasekwindla kwafuneka ndihombise iingubo zam zentombi enamagqabi. Amagqabi aphilayo ayengalunganga koku, njengoko khawuleza ubonakale (umdilili kwaye ujijekile). Ke, umbuzo waba: indlela yokwenza amagqabi amahle ekwindla ephepheni?
Ndenze oku: Ndathatha amagqabi amahle okuhlala (imaphu, oak, ibirch), ndazijikeleza kumaphepha anemibala ndawasusa. Emva koko watsala imithambo. Amagqabi ajikile aba ziimo ezahlukeneyo kwaye ayinyaniso.
Kodwa unokwenza kube lula ngakumbi: ukusika amagqabi ngokwepateni evela kwi-Intanethi. Umzekelo, koku:
Ke kuyenzeka ukuba wenze amagqabi acekethekileyo ukusuka ephepheni, umzekelo, kwendlela yokuhombisa.
Kwakhona kunokwenzeka kwiphepha yenza amagqabi amaninzi. Umzekelo, iseshini yokufundauyenza njani iphepha elisezantsi.
Uya kudinga iphepha elinemibala okanye ikhadibhodi. Ngokwesi skim, usonge, ususe, kwaye emva koko usikwe, njengoko kubonisiwe kwifoto. Songa iphepha ngeconion kwaye ubambe embindini. Ufumana amagqabi amangalisayo:
Kuyenzeka ukuba wenze amagqabi ukusuka ephepheni usebenzisa ubuchule bokukhulisa. Uya kudinga umonde. Kodwa isiphumo sikufanele. Amanyathelo ngamanqanaba ngamanqanaba kwifoto:
Ndiyathanda ukuba uphumelele!
Amagqabi amahle ekwindla awayi kuhombisa iholo nje kuphela ngokubhiyozelwa kwe-Qu; Ball ye-Autumn ”; kodwa kunye nekona lakho ... amaphetshana anjalo kulula ukwenza. Ukuba awunayo italente yomculi, ngoko unokusebenzisa iipensile eziqhelekileyo
Ukuba uyathanda ukusebenza kubuchule be -amiami, unokwenza la maphepha
Kubathandi bokufaka i-quilling, kukho nokukhethwa kwiincwadana ezinemifanekiso
Amagqabi ephepha anokwenziwa ngeendlela ezininzi.
Unokukhuphela iitemplate kwi-Intanethi kwaye usike nje.
Kukho itemplate ezininzi ezahlukeneyo kwi-Intanethi ngoku, ke ufumana amaphetshana amahle
Kodwa eyona inketho kukufumana amaphetshana esitratweni uze ekhaya
Ukuba kusebusika ngaphandle - ungathatha igqabi elinye kwisityalo sasekhaya (esingafunekiyo)
Beka igqabi ephepheni okanye kwikhadibhodi - wenze isangqa kwaye usike amanani egqabi
Iya kuphumelela ibe intle kakhulu, kwaye ngokubaluleke kakhulu
I-Autumn lelona xesha liqaqambileyo nelimibalabala kakhulu lonyaka. Amagqabi e-Autumn anokwenziwa ngamaphepha anemibala emacala mabini, atyunjiweyo aze anqunywe .. Ngapha koko, zininzi izinto onokukhetha kuzo.Ndicebisa ukuba ndibukele ividiyo malunga nendlela yokwenza amaphepha asekwindla.
Amaqabunga из iphepha zinokwenziwa ngeendlela ezininzi. Ziyakwazi ukusikwa zihonjiswe kwaye zihonjiswe ngepeyinti kunye neepensile, ezenziwe ngeglue kwikhadibhodi kwaye zilungisiwe.
Ingenziwa kumaphephandaba kusetyenziswa ubugcisa bevintage.
Unokwenza amagqabi kwezinye iindlela ezahlukeneyo, umzekelo, origami, ukucaphula.
Ubuciko obunjalo bephepha ukusuka amagqabi ekwindla ihombise igumbi ngokufanelekileyo kwaye baya kukukhumbuza ezona zintle.
Ukwenza mhle kakhulu ngee-pleats uludwe, funa iphepha, iipendi ze-gouache.
Masibone yeklasi kwiklasi:
Okanye enye efana nale MK:
Unokwenza kwakhona iphepha elihle kubuchwepheshe ukucaphula ukusuka kwiziqwenga zamaphepha kwimibala eyahlukeneyo
Ngamagqabi ephepha, ubugcisa obuhle obufunyenweyo obunokuhombisa igumbi lakho. Bongeza okwahluka kwaye bazisa imibala esebenzayo kunye nemozulu.
Amagqabi (imaphu, ipopile, ibirch kunye nabanye) kwiphepha eliya kujongeka liyinyani ukuba lenziwe luthando kwaye, ewe, ngobuchule. Ndiza kukuxelela ezona ndlela zilula onokuthi uzisebenzise, ​​Olukhetho olunjalo, ngendlela efanelekile ukusebenza nabantwana.
1). Ndincoma kakhulu kubaqalayo inketho elula xa iphepha linokufakwa ngebrashi kwaye emva koko iphepha lisikwe kusetyenziswa itemplate.
Nayo nayiphi na ipeyinti inokusetyenziswa - amanzi, igouache. Unokwenza itemplate ngezandla zakho, okanye uzobe kuyo nayiphi na incwadi. Umntwana ngamnye uneencwadi zokufaka imibala, ngoko ke unokuzoba amagqabi kuwo. Okanye unokuvula imifanekiso kwikhompyuter kwaye umane uzoba kwiscreen esibonisa. Sibeka itemplate kwiphepha elomileyo lephepha kwaye silisike ngaphandle.
2). Ukhetho lwesibini ngamagqabi avela ephepheni; i-bobbinquot; (njengoko ndibabiza njalo). Ewe, uqikelele ukuba yayiyindlela yokubiza.
Ukusuka kwiincwadana ezinemifanekiso kwixesha elizayo, unokwenza imifanekiso eyahlukileyo yobuhle, unokwenza iitshomi, amakhadi, iincwadi kunye nemidlalo.
Unyana wam kunye nam siye saqokelela amagqabi asekwindla, sawomisa phakathi kwamaphepha ezincwadi. Emva koko sele bejikelezwe kumaphepha ama-albhamu, kwaye bazama ukuphindaphinda zonke iipateni zamagqabi ngokwabo, benika umbala ngopende omdaka wamanzi. Ihambe kakuhle kakhulu kwaye umntwana wayeyithanda kakhulu.
emva koko basika ngaphaya komda kwaye bahombisa iifestile zegumbi lokuhlala. Ikhephu ebusika
Kwaye okwangoku, amagqabi agqityiweyo anokugqojozwa kancinane, kuya kubakho ukufana ngakumbi kunokwokwenyani.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,352.